SMX Wakhtiga Dheeraadka: Qorshaha iyo xogta habaysan - dahab qarsoon ee SEO-yada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/SMX Wakhtiga dheeraadka ah: Qorshaha iyo xogta habaysan - dahab qarsoon ee SEO-yada
SMX Wakhtiga dheeraadka ah: Qorshaha iyo xogta habaysan - dahab qarsoon ee SEO-yada
SMX Overtime waa qayb ka mid ah taxanaha SMX ku hadla ee ka yimi soo-jeediyeyaal shirar oo ka jawaabaya su'aalaha ka soo qaybgalayaasha ee mawduucyo kala duwan.
Q. Ma u qalantaa hirgelinta qorshaynta haddii aysan jirin isbadal muuqda oo ku saabsan natiijada raadinta ee SERP, kaliya si looga caawiyo Google si fiican u fahamto waxyaabaha aad ka kooban tahay guud ahaan?
A. Haa, waxay hubaal noqon kartaa in la hirgeliyo xogta habaysan, xitaa haddii aysan jirin saameyn toos ah oo loogu talagalay natiijooyinka hodanka ah ee SERPs. Sida aan ognahay, Google ayaa si joogto ah u hagaajinaysa muuqaalka SERP sidaas darteed natiijooyin hodan ah oo cusub ayaa had iyo jeer suurtagal ah. Xogta qaabaysan waxay ka caawin kartaa Google si uu u fahmo waxa ku jira bogga iyo sidoo kale inay ka caawiso inay fahmaan sida waxa ku jira ula xidhiidha hay'adaha ay aqoonsato.
la xidhiidha: Wax badan ka baro xogta habaysan ee qaybta HTML ee Hagahayaga SEO.
Q. Miyaad ku dartay MREID-yada xogta habaysan ee macmiilka? Hadday sidaas tahay, miyaad aragtay wax faa'iido ah iyo madmadow yaraaday SERPs wixii su'aalo ah ee la bixiyay?
A. MREID-yada (aqoonsiyada cidda la akhriyi karo mishiinka) xaqiiqdii waa shay ka faa'iidaysan kara fahamka Google ee ku xeeran cidda aasaasiga ah ee bogga.
MREIDs ayaa Google siiya xadhig u go'an oo la xidhiidha cid gaar ah. Tani waxay la mid noqon doontaa sida lambarka SKU u tixraaco badeecad gaar ah. In kasta oo xogta habaysan ee saamaynta tooska ah ee qiimayntu ay tahay wax aan dhib lahayn, adeegsiga MREIDs waa fursad weyn oo lagu caawinayo Google si ay si toos ah u fahamto cidda, gaar ahaan marka cidda ay wadaagto heshiiska magacaabista kuwa kale. Bill Slawski waxa uu ogaaday in Google ay adeegsatay ID-yada Mashiinka ee la soo dhaafay si loo horumariyo raadinta sawirka.
Marka la tixraacayo MREID-ka hantida "sameAs", Google wuxuu ogaan karaa hubaal dheeraad ah, cidda saxda ah ee la tixraacay. Si ahaan, tani waxay la mid noqon doontaa tixraacinta bogga Wikidata ee ururka ee la xidhiidha xogta habaysan.
Q. Waa maxay hababka ugu fiican ee calaamadaynta schema ee shayga alaabta ee boggaga qaybta e-ganacsiga? Qaar waxay soo jeedinayaan liiska Alaabta, dukumeenti kale ayaa sheegaya in alaabtu aysan tilmaamin bog kale.
A. Guud ahaan, waxaan kugula talineynaa in shay kasta oo ku yaal boggaga liiska alaabada lagu calaamadiyo calaamadaynta "Alaabada" taas oo qeexaysa macluumaadka lagu bixiyay nuxurka muuqda ee liis kasta. Dabcan, tani waa in si firfircoon loo soo saaro si ay had iyo jeer u muujiso agabka bogga.
Haddi yoolka xogta habaysan ay tahay in Google laga caawiyo in uu si fiican u fahmo waxa ku jira bogga, intii la qeexi lahaa shay kasta oo liiska ku jira waxa laga yaabaa in ay Google ka caawiso in uu fahmo in boggu ka kooban yahay alaab la isu geeyey.
Ka eeg maqaallo badan oo ku saabsan xogta habaysan iyo schema.
Caymis badan oo ka yimid SMX
SMX Wakhtiga Dheeraadka: Waa kan sababta hagaajinta sawirada Google My Business ay muhiim u tahay
SMX Wakhtiga Dheeriga ah: Goorta la isticmaalayo Q&A ee Google My Business iyo sida looga dhigo mid cusub
SMX Wakhtiga Dheeraadka: Kor u qaad darajada JawaabtaBox iyo Dadku sidoo kale Way Weydiiyaan
SMX Overtime: Sida loo socodsiiyo ololeha raadinta ugu sarreeya ee waxtarka leh
La qabsiga istiraatiijiyaddaada SEO si loo jilciyo saameynta COVID-19 ee taraafikada dabiiciga ah